Aafno Khabar | Trusted Online News Protal of Nepal महामूर्ख सम्मेलनको तयारी तीव्र, को-को सहभागि हुँदैछन् यो वर्षको महामुर्ख सम्मेलनमा ? | Aafno Khabar
महामूर्ख सम्मेलनको तयारी तीव्र, को-को सहभागि हुँदैछन् यो वर्षको महामुर्ख सम्मेलनमा ?
२०७६ फाल्गुन २१ गते ०१:३१ प्रकाशित
धनुषा । हरेक वर्ष जनकपुरधाममा आयोजना हुने महामूर्ख सम्मेलनको तयारी शुरु भएको छ । जनकपुरधाम मिथिला नाट्य कला परिषद् जनकपुरद्वारा हरेक वर्ष फागु पूर्णिमाको अवसरमा आयोजना गर्ने महामूर्ख सम्मेलनको तयारी शुरु भएको परिषदले जनाएको छ ।
महामूर्ख सम्मेलन एउटा यस्तो सम्मेलन हो, जहाँ सबैभन्दा ठूलो मूर्ख (महामूर्ख) को उपाधि लिन प्रतिस्पर्धा हुन्छ । महामूर्खको उपाधि लिने मानिस कुनै सामान्य व्यक्ति नभएर समाजमा नाम कहलिएका ‘विद्वान’ व्यक्ति हुने गर्छन् । उपाधिका लागि बुद्धिजीवि, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, राजनीतिक दलका नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेमध्ये एकजनाले ‘महामूर्ख’को उपाधि पाउँछन् भने अन्य प्रतिस्पर्धी विभिन्न शीर्षकमा ‘मूर्ख’को उपाधि पाउँछन् ।
एक दिन होली (होरी) महोत्सव र अर्को दिन महामूर्ख सम्मेलनको कार्यक्रम आयोजन गरेर महामूर्खको उपाधि दिने गरिन्छ । मिथिला नाटयकला परिषदका पूर्व अध्यक्ष सुनिल मल्लिकले यस वर्ष महामूर्खको छनोट गरिसकेको बताउनुभयो । प्रत्येक वर्ष दिइने उपाधिमा महामूर्खलाई बढी ग्राहता दिइने भएकाले यस वर्षदेखि विभिन्न विद्यामा महामूर्खको पदवी दिइने बताइएको छ । तयारीलाई तीब्र पारिएपनि कोरोना भाइरसको समस्याले गर्दा यस वर्ष सम्मेलन केही खल्लो हुने अनुमान गरिएको छ ।
सम्मेलनमा मैथिली भाषा क्षेत्रका साहित्यकार तथा कवि र लेखकद्वारा विभिन्न हास्य कविता तथा गजल वाचन हुनेछ । पछिल्लो समय मानिसले आफ्नो संस्कृति बिर्सिँदै गएको र यसैलाई बचाउने उदेश्यले विगत २७ वर्षदेखि महामूर्ख सम्मेलन गरिँदै आएको मिथिला नाटयकला परिषदका अध्यक्ष परमेश झाले बताउनुभयो ।
यसभन्दा पहिले महामूर्खको उपाधि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहलाई प्रदान गरिएको थियो । यस वर्षको महामूर्ख सम्मेलन फागुन २५ र २६ गते गरी दुई दिन मनाइनेछ ।